Blade Runner: Peni nePepa inorova miriyoni - mutambo poindi - bhodhi nemitambo yemavhidhiyo paKickstarter
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 5, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Iyo Blade Runner peni uye bepa-yekutamba-mutambo mutambo uri kuita zvakanaka kwazvo paKickstarter. Muparidzi Fria Ligan (Ligi Yemahara) akatokwanisa kukurudzira vateveri vanopfuura zviuru gumi kuti vatore chikamu nemushandirapamwe wekupa mari. Izvi zvakare zvine mhedzisiro yakanaka mune zvemari: anopfuura miriyoni imwe euros yakatounganidzwa nenzira iyi.
Zvinoita senge Yemahara League yakaita zvese nemazvo neBlade Runner yekuunganidza mari. Pfungwa yekushandura iyo yekare firimu kuita peni uye bepa-kutamba-mutambo mutambo, umo mafeni anogona kutsvedza mumabasa evanomhanya blade ivo pachavo, yave yakawanda kupfuura yakagamuchirwa. Chirongwa cheKickstarter chatove kutenderedza zviuru gumi nerimwe kubva muzana pamusoro pezvainotarirwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu emaeuro.
Mutambo wekutamba-wakavakirwa pafirimu
Anopfuura miriyoni euros kubva kune vanopfuura zviuru gumi zvevateveri - ndiyo rekodhi yeBlade Runner: The Roleplaying Game kusvika zvino. Chinhu chose chinotaridzika zvakanyanya kushamisa muSwedish korona: zvino inopfuura mamirioni gumi. Uye: Pachine nguva yakawanda yekuti vaparidzi veFria Ligan vawedzere mari yacho - kana kukurudzira vateveri vakawanda kutsigira mushandirapamwe. Mari ichiri kuvhurwa kwemavhiki matatu.
Vatambi vanofanirwa kubhadhara angangoita makumi maviri nemapfumbamwe emadhora, asi mabasa eBlade Runner peni-ne-bepa mutambo anobva awanikwa akangoita dijitari semafaira ePDF. Kana iwe uchida kubata bhuku rakadhindwa mumaoko ako, unofanirwa kuchera zvakadzika muhomwe yako. Kune vanofa-vakaoma mafeni etemplate, Fria Ligan anotova nedeluxe vhezheni yakagadzirira, iyo inodhura 29 euros - asi pane yakanaka hologram yakadhindwa pabutiro, pakati pezvimwe zvinhu.
Hazvina mhosva kuti ndeipi vhezheni yaunotsigira, unokwanisa kutanga kutamba zvakanaka isati yaburitswa zviri pamutemo. Mushure mekupera kweKickstarter mushandirapamwe, Friria Ligan ichaita mafaera ePDF emitemo uye yekutanga set inowanikwa kune wese anotsigira se "Early Access". Mutambo hausi wekupedzisira, asi maererano nemuparidzi watove wakakwana.
Vatsigiri vakatovhura zvibodzwa zvakawanda nemamiriyoni avakasimudza pamwechete, asi mamwe achiri akavhurika.
Iyo Kickstarter campaign ye Peni uye Pepa paBlade Runner inoenderera kusvika May 26th. Iyo peni uye bepa-yekutamba mutambo weBlade Runner unotarisirwa kuburitswa muna Mbudzi 2022, kureva kuti gore rino risati rapera.
Blade Runner 2049 (4K Ultra HD) [Blu-ray] * 14,49 EUR tenga
Kare Nyowani paFortnite: Tamba vanopfura pasina kuisirwa
Inotevera Mobile Game: Warcraft Arclight Rumble inopatsanura vateveri
Assassin's Creed Valhalla: mwaka wechina wakatanga
Heidelberger Spieleverlag inosimbisa shanduro yeGerman ye Star Wars - Rebellion uye inozivisa kuwedzera kutsva.
Smyths Toys iri kushandura zvitoro zveToys'r'Us